Umaki: ukuhlangana kwemikhombandlela yezikhangiso engcono | Martech Zone
Umaka: ukuhlangana kwemikhombandlela yezikhangiso engcono
Enye yezinselelo ezinkulu kubashicileli nakunoma imuphi umakethi namuhla ukuvimba izikhangiso. Kubamakethi, ukukhuphuka kwamanani okuvinjelwa kwezikhangiso kuholela ekungafinyeleli kuzithameli ezivimbela ukukhangisa. Ngaphezu kwalokho, amazinga aphezulu okuvimba izikhangiso aholela ekusungulweni kwezikhangiso ezincane, ezingagcina zikhuphule amanani we-CPM. Kusukela izivimbeli zezikhangiso zaqala ukusebenza eminyakeni eyishumi eyedlule, amazinga okuvimba akhuphuke kakhulu, athola izigidi zabasebenzisi futhi asakazeka kuwo wonke amapulatifomu. Okunye okutholakele kwakamuva